नागरिक ९ वैशाख २०७९ शुक्रबार १ मिनेट पाठ
ब्ल्यूएचओका महानिर्देशक र स्वास्थ्यमन्त्रीबीच भेटः नेपालद्वारा सहयोगको आग्रह
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)का महानिर्देशक डा. टेड्रोस अधानोम गेब्रेयससले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडासँग भेटवार्ता गरेका छन्।
ख्वप अस्पताल अब सय शैयामा
भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित ख्वप अस्पताललाई सय शैय्या क्षमतामा स्तरोन्नति गर्ने भएको छ। हाल सिमित शैय्यामा सञ्चालित अस्पतालमा शैया थपेर एक सय शैय्या सुविधाको अस्पताल बनाउन लागिएको हो।
नागरिक संवाददाता ८ वैशाख २०७९ बिहीबार २ मिनेट पाठ
संक्रमणको जोखिम रहेकाले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न आग्रह
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण छिमेकी मुलुक भारतमा बढ्दै गएपछि नेपालमा पनि सङ्क्रमणको जोखिम रहेकाले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न अनुरोध गरिएकाे हाे।
बाँकेको भेरी अस्पताल, नेपालगञ्जलाई सेवा प्रवाहमा उत्कृष्ट काम गरेको भन्दै सम्मान गरिएको छ।
नागरिक ६ वैशाख २०७९ मंगलबार २ मिनेट पाठ
विराटनगरमा निःशुल्क कृत्रिम हात प्रतिस्थापन शिविर हुने
विराटनगरमा ३ दिने निःशुल्क कृत्रिम हात प्रतिस्थापन शिविर आयोजना गरिने भएको छ। द ह्याण्ड प्रोजेक्ट जर्मनीको सहयोग न्यूरो अस्पतालसँगको सहकार्यमा करुणा फाउण्डेशन र रोटरी क्लव विराटनगरले शिविर आयोजना गर्न लागेका हुन्।
विनोद सुवेदी ५ वैशाख २०७९ सोमबार १ मिनेट पाठ
नेपाल नेत्रज्योति संघको ताप्लेजुङ शाखा देशभरकै उत्कृष्ट
संघको उद्देश्य परिपूर्तिमा उल्लेख्य योगदान दिएको भन्दै नेत्रज्योति संघ केन्द्रीय समितिले संघको ताप्लेजुङ शाखालाइ नगद ३० हजारसहित पुरस्कृत गरेको हो।
खगेन्द्र अधिकारी ५ वैशाख २०७९ सोमबार २ मिनेट पाठ
सेवा सुविधा विस्तारसहित इटहरी सामुदायिक अस्पताल सञ्चालनमा
दुई दशक अघिदेखि सञ्चालनमा आएको इटहरी सामुदायिक अस्पतालले लगानी थप गरी सेवा सुविधा विस्तार गरेको छ। २२ वर्षदेखि सञ्चालमा आएको सामुदायिक अस्पतालले लगानी थपेर १५ बेडमा सञ्चालन हुने गरी सेवा सुविधा विस्तार गरेको हो।
अमर खड्का ४ वैशाख २०७९ आइतबार २ मिनेट पाठ
स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गएपछि जिल्लामा रगतको अभाव देखिन थालेको छ। भरतपुरस्थित क्षेत्रीय रक्तसञ्चार केन्द्रमा आवश्यकताअनुसार रगत उपलब्ध हुन छाडेको छ।
नागरिक ४ वैशाख २०७९ आइतबार १ मिनेट पाठ
अस्पताल सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान हुन आवश्यक छ: डा. ज्ञवाली
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या वैज्ञानिकहरुको आठौं शिखर सम्मेलनले स्वास्थ्य सम्बन्धी अनुसन्धनात्मक उत्पादनलाई जनतामाझ पुर्‍याउनु पर्नेमा जोड दिएको छ।
उपकुलपति डा. वसन्त लामिछानेले प्रतिष्ठानमा आमा सुरक्षा कार्यक्रम निःशुल्क रहेको जनाउँदै अब प्रसूति सेवा लिन आउने महिलालाई शुल्क नलाग्ने बताए।
नागरिक ३ वैशाख २०७९ शनिबार १ मिनेट पाठ
दाङको तुलसीपुरस्थित राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या शून्य भएको छ।